News - Lab Grown စိန်ဆိုတာဘာလဲ။
Lab Grown စိန်ဆိုတာဘာလဲ။
အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမည်ဆိုလျှင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောစိန်များသည်မြေကြီးမှတူးဖော်မည့်အစားလူများပြုလုပ်သောစိန်များဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါကဤဝါကျအောက်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးဘာကြောင့်ရှိနေရကြောင်းသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုမှာဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သည့်စိန်များနှင့်သူတို့၏ဝမ်းကွဲများကိုဖော်ပြရန်အမျိုးမျိုးသောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဝေါဟာရအချို့ကိုစကြစို့။
ဒြပ်စင်။ ဤဝေါဟာရကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ခြင်းသည်ဤမေးခွန်းတစ်ခုလုံးကိုသော့ဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒြပ်သည်အတု (သို့) အတု ဟူ၍ ပင်ဆိုလိုနိုင်သည်။ ဒြပ်ပေါင်းဆိုသည်မှာလည်းလူလုပ်၊ ပုံတူကူးခြင်း၊ သို့သော်ဤအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဒြပ်စိန်” ဟုဆိုသောအခါအဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။
ကျောက်မျက်လောက၌ဒြပ်သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ နည်းပညာအရပြောသောအခါ၊ ဒြပ်ကျောက်မျက်များသည်ဖန်တီးထားသောကျောက်မျက်နှင့်တူသောကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူလုပ်ကျောက်ဆောင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်“ ဒြပ်စိန်” သည်သဘာ ၀ စိန်နှင့်တူသောကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုများရှိသည်။ မကြာခဏမှားယွင်းစွာဒြပ်စိန်များအဖြစ်ဖော်ပြထားသောများစွာသောအတုသို့မဟုတ်အတုကျောက်မျက်များအတူတူပင်မရနိုင်ပါ။ ဤလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းက“ ဒြပ်” ဟူသောဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအသည်းအသန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ထို့ကြောင့်လူလုပ်စိန်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်“ ဓာတ်ခွဲခန်း” ထက်“ ဓာတ်ခွဲခန်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်ရန်ဓာတ်ခွဲခန်းမှပြုလုပ်သောစိန်များမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုအနည်းငယ်နားလည်ရန်ကူညီသည်။ တစ်ခုတည်းသောကျောက်သလင်းကြီးထွားရန်နည်းစနစ်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးကတော့မြင့်မားသောဖိအားမြင့်အပူချိန် (HPHT) နည်းပညာဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်စိန်ပစ္စည်းမျိုးစေ့မှစတင်ကာသဘာဝအလွန်ဖိအားများနှင့်အပူချိန်အောက်ရှိသဘာဝတရားကဲ့သို့စိန်အပြည့်အ ၀ ထုတ်လုပ်သည်။
ဒြပ်စိန်ကြီးထွားရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းမှာဓာတုအငွေ့ပျံခြင်း (CVD) နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ CVD လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အခန်းတစ်ခန်းသည်ကာဗွန်ပေါများသောအငွေ့နှင့်ပြည့်နေသည်။ ကာဗွန်အက်တမ်များကိုကျန်ဓာတ်ငွေ့များမှထုတ်ယူရရှိပြီးကျောက်မျက်အလွှာအလွှာကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်ဆောက်ပေးသောစိန်ကျောက်သလင်းကျောက်ပြားပေါ်တွင်စွန့်ပစ်သည်။ သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည် ဘယ်လိုဓာတ်ခွဲခန်းစိုက်ပျိုးစိန်များလုပ်နေကြသည် ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်ပေါ်မှာငါတို့အဓိကဆောင်းပါးကနေ။ ယခုအချိန်တွင်အရေးကြီးသောထုတ်ယူမှုမှာဤဖြစ်စဉ်နှစ်ခုလုံးသည်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြစ်ပြီး၊ ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်မှုနှင့်တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောသဘာဝစိန်များဖြစ်သည်။ အခုတော့ဓာတ်ခွဲခန်းကြီးမှစိန်ပွင့်တွေကိုစိန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
Lab Grown စိန်များကို Diamond Simulants များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်
ဘယ်အချိန်မှာဒြပ်တစ်ခုဒြပ်မဟုတ်ပါဘူး? အဖြေမှာ၎င်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ တပြိုင်နက်တည်းကျောက်မျက်ရတနာများသည်သဘာဝကျောက်မျက်ရတနာနှင့်တူသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသို့မဟုတ်အဖြူရောင်နီလာသည်စိန်နှင့်တူသောကြောင့်၎င်းသည်စိန်နှင့်တူသည်။ ထိုအဖြူရောင်နီလာသည်သဘာဝဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဒီမှာလှည့်ကွက်ဖြစ်သောဒြပ် Sapphire ဖြစ်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြissueနာကိုနားလည်ရန်သော့ချက်မှာကျောက်မျက်ရတနာကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည် (သဘာဝနှင့်ဒြပ်စင်အရ) မဟုတ်ဘဲအခြားကျောက်မျက်ရတနာနှင့်တူသောအစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူလုပ်အဖြူရောင်နီလာသည်“ ဒြပ် Sapphire” သို့မဟုတ်၎င်းကို“ စိန်ပွင့်” အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်“ ဒြပ်စိန်” ဟုပြောခြင်းသည်မမှန်ကန်ပါ။ စိန်ကဲ့သို့တူညီသောဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။
အဖြူရောင်နီလာ၊ စျေးကွက်ဖြန့်ချိပြီးသောနီလာနီလာသည်နီလာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းကိုစိန်အစားအစားထိုးအသုံးပြုပါက၎င်းသည်စိန်ပွင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောကျောက်မျက်များသည် ထပ်မံ၍ အခြားကျောက်မျက်ကိုတုပရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုထပ်တူပြုလုပ်ရန်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမထုတ်ဖော်ပါက၎င်းတို့ကိုအတုဟုယူဆကြသည်။ နီလာဖြူသည်သဘာဝအားဖြင့်အတုမဟုတ်ပါ (အမှန်မှာ၎င်းသည်လှပပြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်) ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုစိန်အဖြစ်ရောင်းချလျှင်၎င်းသည်အတုဖြစ်လာသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ simulants အများစုသည်စိန်များကိုတုပရန်ကြိုးစားသော်လည်းအခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ (နီလာ၊ ပတ္တမြားစသည်တို့) ကိုလည်းထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဤတွင်လူကြိုက်အများဆုံးစိန်ခြင်း simulants အချို့ကိုရှိပါတယ်။
Synthetic Rutile ကို ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအစောပိုင်းစိန်ကြိတ်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နောက်လူလုပ်ပြုလုပ်သောစိန်ပွင့်ကစားနည်းမှာ Strontium Titanate ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များသောစိန်ပွင့်များဖြစ်လာသည်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတုန်းက Simulants နှစ်ခုဖြစ်သော Yttrium Aluminum Garnet (YAG) နှင့် Gadolinium Gallium Garnet (GGG) တို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်လူလုပ်စိန်ပွင့်များဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ထပ်မံပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိန်ဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်“ အတု” သို့မဟုတ်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ YAG သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောကျောက်သလင်းတစ်ခုဖြစ်သည် လေဆာဂဟေဆော်.
ယနေ့ခေတ်အထိလူကြိုက်အများဆုံးစိန်ပွင့်သည်ဓာတု Cubic Zirconia (CZ) ဖြစ်သည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်ရန်စျေးပေါသည်နှင့်အလွန်တောက်ပ။ ၎င်းသည်စိန်ပွတ်တိုက်ပြုလုပ်သောဒြပ်ကျောက်မျက်ရတနာ၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CZs များသည်များသောအားဖြင့်မှားယွင်းစွာပြုလုပ်ထားသောစိန်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
Synthetic Moissanite သည်ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစိန်နှင့်တူသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်လူသားဖန်တီးထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စိန်များသည်အပူကိုလွှဲပြောင်းရာတွင်အထူးကောင်းမွန်ပြီး Moissanite ကဲ့သို့လည်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူကြိုက်အများဆုံးစိန်စမ်းသပ်သူများသည်ကျောက်မျက်ရတနာသည်စိန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အပူပျံ့နှံ့မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် Moissanite သည်စိန်နှင့်ကွဲပြားသော optical ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Moissanite သည်နှစ်ဆန့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Moissanite သည်စိန်ကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့် (၎င်း၏အပူစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့်) ၎င်းသည်စိန်သို့မဟုတ်ဒြပ်စိန်ဖြစ်သည်ဟုလူများထင်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်တူညီသောကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းပုံ (သို့) စိန်၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုများမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဒြပ်စိန်မဟုတ်ပါ။ Moissanite သည်စိန်ပွင့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင်“ ဒြပ်” ဟူသောဝေါဟာရသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာနိုင်သည်။ Moissanite နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်စိန်နှင့်တူစွာပြုမူလုပ်ဆောင်သော်လည်း၎င်းကို“ ဒြပ်စိန်” ဟုမည်သည့်အခါမျှမခေါ်သင့်သောဒြပ်ရတနာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုကြောင့်လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းအများစုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကသဘာဝစိန်နှင့်တူသောဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများကိုမျှဝေထားသည့်စစ်မှန်သောဒြပ်စိန်ကိုရည်ညွှန်းရန်“ ဓာတ်ခွဲခန်းမှစိန်ပွင့်” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမည်မျှဖန်တီးနိုင်ကြောင်းစိန်” ဟုဖော်ပြထားသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖန်တီးပေးသည့်နောက်ထပ်စိန်ထပ်တူများလည်းရှိသည်။ စိန် coated Cubic Zirconia (CZ) ကျောက်မျက်များကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောစိန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဓာတုအငွေ့ပျံခြင်းနည်းပညာ (CVD) ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်။ စိန် coated CZs နှင့်အတူ, အလွန်ပါးလွှာသောဒြပ်စိန်ပစ္စည်းတစ်ခု CZ ၏ထိပ်ပေါ်မှာထည့်သွင်းထားသည်။ nanocrystalline စိန်အမှုန်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30mm မှ 50 nanometer ၏အထူသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အက်တမ် ၃၀ မှ ၅၀ အထူသို့မဟုတ် 0.00003mm ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအလွန်ပါးလွှာသောဟုပြောသင့်သည်။ CVD စိန် coated Cubic Zirconia ဒြပ်စိန်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာ Cubic Zirconia စိန်ပွင့်များကိုသာဂုဏ်တင်ကြသည်။ သူတို့၌တူညီသောမာကျောမှုသို့မဟုတ်စိန်၏ကြည်လင်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိပါ။ မျက်မှန်အချို့ကဲ့သို့ CVD စိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Cubic Zirconia သည်အလွန်ပါးလွှာသောစိန်ဖြင့်သာဖုံးအုပ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မရိုးမသားရောင်းဝယ်သူအချို့အားသူတို့ကိုစိန်စိန်များဟုခေါ်ဆိုခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ အခုသင်ပိုကောင်းသိပြီ
Lab Grown စိန်များကိုသဘာဝစိန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်
ဒါကြောင့်အခုတော့ဘယ်ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်တဲ့စိန်တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုငါတို့သိပြီဆိုတော့သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှရသောစိန်များသည်သဘာဝစိန်များနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်နည်း။ အဖြေဒြပ်၏အဓိပ္ပါယ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းဒြပ်ထုတစ်ခုသည်သဘာဝစိန်နှင့်တူသောပုံဆောင်ခဲနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်တူသည်။ သူတို့ကအတူတူပင်တောက်ပ။ သူတို့ကအတူတူပင်မာကျောမှုရှိသည်။ ဘေးချင်းယှဉ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှရသောစိန်များသည်သဘာဝစိန်များနှင့်တူသည်။
သဘာဝနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသောစိန်ပင်စည်ပင်နှင့်သူတို့ပြုလုပ်ပုံနှင့်ကွာခြားချက်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောစိန်များသည်လူတို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်ထားပြီးသဘာဝစိန်များကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည်။ သဘာဝသည်ထိန်းချုပ်ထားသော၊ မြုံနေသောပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ပါ၊ သဘာဝဖြစ်စဉ်များမှာများစွာကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်ရလဒ်သည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါ။ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်စေသည့်သဘာဝပါဝင်မှုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသင်္ကေတများစွာရှိသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောစိန်များသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်သဘာဝနှင့်မတူသည့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်၏လက္ခဏာများရှိသည်။ ထို့အပြင်လူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်မပြည့်စုံပါ။ ၎င်းတို့သည်လူသားတို့အားကျောက်မျက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည့်သူတို့၏အားနည်းချက်များနှင့်သဲလွန်စများကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ပါဝင်မှုများနှင့်ကြည်လင်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်သိမ်မွေ့သောအပြောင်းအလဲများသည်ဓာတ်ခွဲခန်းကြီးထွားမှုနှင့်သဘာ ၀ စိန်များကိုခွဲခြားရန်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် စိန်တစ်လုံးဓာတ်ခွဲခန်းကြီးထွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲ သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဆောင်းပါးကနေသဘာဝ။
FJU အမျိုးအစား: Lab Grown စိန်
post အချိန်: Aprပြီ-08-2021